China B UFO အလင်းစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Liper
အခမဲ့ EC Down အလင်းအရွယ်အစား
အမြင့်ပါဝါ 50watt IP65 Down အလင်း
ရောင်းအားအကောင်းဆုံး HS နေရောင်ခြည်
Angle Adjustable E Track အလင်း
B က UFO အလင်း
IP65 Down အလင်း Generation II ကို
အထူးအကြံပြုလိုပါတယ် C လမ်းမီး
မော်ဒယ် ပါဝါ Lumen ဒင် ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား
LPUF-100B01 100W 8750-8970LM N 5265x130mm
High bay light သည်အားကစားရုံများ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ ဂိုဒေါင်နှင့်စက်မှုနေရာများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဤနေရာအားလုံးတွင်တူညီသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိသည် - မျက်နှာကျက်သည်အလွန်မြင့်မားပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်မလွယ်ကူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလင်းရောင်ကိုတပ်ဆင်။ အစားထိုးလိုပါကအလွန်အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာသည်။ Led Light bay Light ကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း။
စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၊ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း၊ တောက်ပမှုသည်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များအားလုံးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။
Lipper IP65 UFOs သည်ဤလိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကောင်းသောစက်မှုအလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးနိုင်သည်။
မူပိုင်ခွင့်ဒီဇိုင်း—ရိုးရှင်းပြီးကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းတစ်ခုတွင်အအေးခံသည့် UFO ပုံစံသည်စျေးကွက်တွင်အလွန်ထူးခြားသည်။ ကျွန်ုပ်သီးသန့် mode၊ စျေးကွက်တွင်တူညီသောရှာဖွေမှုကိုသင်မရနိုင်ပါ။
ကြာရှည်ခံမှု—အအေးခံနှင့်အတူသွန်းလောင်းသောလူမီနီယံအပူစုပ်ကောင်းမွန်သောအပူဖြာသေချာ။ မြင့်မားသောအပူချိန်အိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးသောဆီမီးခွက်များဖြစ်သော led chip, inductance, mosfet, lamp body ကဲ့သို့သောအပူချိန်ကိုစစ်ဆေးသည်။ Lipper LED UFO မီးလုံးများသည် ၂၄ နာရီဆားငန်မှုန်ရေမွှားစစ်ဆေးမှုကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်ကောင်းသောအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးတပ်ဆင်ထားသည်။ ကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်ထားသောအလင်းအပူချိန်နှင့်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးပန်းချီသည်သက်တမ်းရှည် (၃၀၀၀၀ နာရီ) ကိုအာမခံသည်။
စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့်တောက်ပ—100W နှင့် 200W နှစ်ခုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအလင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှောင်ခန်းမှစစ်ဆေးသည့်အချက်အလက်များအရစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၁၀၀lm / w ဖြင့်လည်ပတ်သည်။ အစဉ်အလာမီးဟောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစွမ်းအင်ကို ၇၀% အထိသက်သာစေသည်။
အိုင်ပီကာကွယ်မှု—ကျွန်ုပ်တို့၏ UFO ဦး ဆောင်သောမီးများသည် IP65 သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးပရိုတက်စတင့်ရေစိုခံစက်ဖြင့်အပူချိန် ၂၄ နာရီအတွင်းစမ်းသပ်နိုင်သည်။
အလင်းသက်ရောက်မှု—High CRI နှင့် R9>0(ပေါင်းစပ်စက်ကွင်းဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး) သည်အလင်းအောက်ရှိအရာဝတ္ထုကိုအရောင်တောက်ပစေပြီးအရောင်အမှန်ကိုပြသနိုင်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ၊ Lipper UFO များသည်ကုန်ပစ္စည်းများကို ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းပြသရန်စူပါမားကတ်၊ စားသောက်ဆိုင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထိုအားလုံးမဟုတ်ပါ! Lipper UFOs များသည် CE နှင့် Rosh အသိအမှတ်ပြုခံထားရပြီး ၃ နှစ်အာမခံဖြင့်လာသည်။ ကိုင်တွယ်ရန်၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ ပရောဂျက်အတွက်လုပ်ဆောင်နေသောဖောက်သည်များအတွက် IES ဖိုင်ကိုလည်းသင်စီမံကိန်းအတွက်အမှန်တကယ်အလင်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသင်တုပနိုင်ရန်သင်ပေးသည်။
ရှေ့သို့ E Backlit Panel ကိုအလင်း
နောက်တစ်ခု: Angle Adjustable E Track အလင်း
Ufo Led High Bay အလင်းရောင်
: D နယူးအမြင့်ပင်လယ်အော်အလင်း
တစ် ဦး က UFO အလင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါသလား။
ကျေးဇူးပြု၍ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ထံ ASAP သို့ပြန်ပို့ပါမည်။
ပဉ္စမအထပ်၊ အဆောက်အ ဦး ၁၊ အမှတ် ၂၃၃ ဟaitangလမ်း၊ Wenzhou Eco & Tech Development Zone၊ Wenzhou City
Liper C စီးရီးမီးပွိုင့်အတွက်လမ်းမီး ...
LED streetlight ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ။
©မူပိုင်ခွင့် - 2020-2021: မူပိုင်ခွင့်များရယူထားပါ။ နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့: